“ရွှေမြန်မာ”: February 2008
Today is my close fri's birthday.
Happy birthday Kyawt !
မန္တလေး ရတနာပုံဈေး မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားနေစဉ်
ရန်ကုန်တွင် လှိုင်သာယာမြို့်နယ်အတွင်းနှင့် ယမန်နေ့က မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယတွင် ထပ်မံ မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တာချီလိတ်တွင်လည် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်း မီးကို ဂရုစိုက် အသုံးပြုသင့်ကြောင်း သတိပေးပါရစေ...
မန္တလေးမြို့တွင် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ မီးလောင်မှု ဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပါတယ်။
Life of yourself
Make something happen. 'Who else will?'
You are unique of all God's creation. Nothing can replace you vzlue it.
Enjoy today. Yesterday is past, and tomorrow is not yet.
သတင်းလာမေးကြတဲ့ မိတ်ဆွေမောင်နှမများအားကလုံိးကု ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နေလည်းပြန်ကောင်းသလောက်ရှိနေပါပြီ။
အချိန်အားရင် အားလုံးနဲ့ ဗဟုသုတဖလှယ်ချင်ပါတယ်။ မမီပြောတာ မှန်သလို ယုန်ကလေးပြောတာလည်း မှန်သင့်သလောက် မှန်ပါတယ်။
တစ်ခါတလေကျတော့လည်း သည်းခံမှုဆိုတာ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပဲ ရှိသင့်ပါတယ်။ လူတွေက
သည်းခံလွန်းရောင့်တက်ကြတတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်လေ။ ဒါပေမဲ့ တတ်နိုင်သရွေ့တော့ လူထဲက
လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေသေးတဲ့အတွက် လိုက်လျောညီထွေစါာ နေတတ်ကြရပါမယ်။
အခုတစ်လော ကွန်ပျူတာများတွင် ဗိုင်းရပ်စ်များတက်နေပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာတွင် ဟတ်ပီးဘတ်ဒေးလို့ ပေါ်လာရင် ၀င်နေပြီလို့ သတိပြုပါ။ ကွန်ပျူတာကို ဖျက်မယ့် ဗိုင်းရပ်စ် ရောက်ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှင့် ကို မခေါက်မိပါစေနဲ့။ ကွန်ပျူတာတစ်ခုလုံးပျက်သွားပါလိမ့်မယ်။ တတ်ကျွမ်းနားလည်တ့သူကို ပြသသင့်ကြောင်း သတင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။
အဓိပ္ပာယ်များနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားသော ကိုယ့်အမည်လေး
သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ၊ မောင်နှမအားလုံးကို ရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ခင်မင်ပါတယ်။
ချစ်သူများနေမှာ ပျှော်ရွင်နိုင်ပါစေနော်ုချစ်သူရှိသူများအတွက်ဆုတောင်းပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယမင်းအတွက် မပါဝင်ကြောင်း။
သူ့အဘိုး ဗိုလ်လရောင်ဟာ နယ်ချဲ့ကို အံတု၊ မြန်မာ့သွေးကို ရဲရဲတောက်ပြခဲ့သူ အာဇာနည်တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဖခင်ရှေ့နေ ဦးဖာရဲ့ Óဏ်ရည်Óဏ်သွေးနှင့် မိခင် ဒေါ်စုရဲ့ ထက်မြက်တဲ့စိတ်ထားတို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ပြောရရင် အဲ မှားလို့ ရေးရရင် ရေးစရာတွေ မကုန်မခမ်းနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်မလည်း မအားတဲ့ကြားက ကျွန်မ ကြည်ညိုလေးစားတဲ့သူရဲ့ မွေးနေ့ကို ဂုဏ်ပြုချင်လွန်းလို့သာ မနည်းအားခဲ့ပြီး ရေးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အရင်နှစ်ကဆိုရင် နေ့ထူးနေ့မြတ်တိုင်း ကျွန်မရဲ့ရင်ထဲက ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အကြောင်းအရာကို ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ ကျွန်မရဲ့အချိန်နဲ့ အလုပ်တွေအားလုံးက ကွက်တိဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ စာဖတ်ချိန်တောင် အိပ်ချိန်ထဲကဖဲ့ပြီး မနည်းယူထားရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေလို့ပါ။ အခု ကျွန်မရဲ့ လက်တစ်ဖက်က တော်တော်ကိုက်နေလို့ စာတိုတိုပဲ ရေးမိတာ တောင်းပန်ပါတယ်နော်။ ဗိုလ်ချုပ်ဟာ ၁၉၁၅ ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ဆယ်သုံးရက်နေ့ ဒီကနေ့ဟာဖြင့် လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ခုချိန်ထိရှိဦးမယ်ဆိုရင် ကိုးဆယ့်သုံးနှစ်တင်းတင်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက မဟုတ်မခံစိတ်ဓာတ်နဲ့ အများအကျိုးသယ်ပိုးပြီး ကိုယ်ကျိုးမဖက်တဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်လို့ အောင်ဆန်းဇာနည်ရယ်လို့ အများက ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့မှာတော့ ပြည်သူပြည်သားအပေါင်း မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်ကျပြီး စိတ်ညှိုးနွမ်းကြပါတော့တယ်။ ဒီကနေ့ဟာဖြင့် အခုရှိဦးမယ်ဆိုရင် ပြည်ထောင်စုကြီး လွတ်လပ်ရေးရအောင်
ယမင်းရဲ့မောင်လေး ပေးပို့တဲ့ကဗျာလေး ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဆက်တည်း ပြောချင်တာကတော့ ယမင်းကို လာရောက်အားပေးကြတဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း မောင်နှမတွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘ၀မှာ ဖြစ်ချင်တာတွေ များပြီး ဘာတစ်ခုမှမဖြစ်လာသေးတဲ့သူအဖြစ် ခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာ ရေနှစ်တဲ့သူတစ်ယောက် ၀ါးတစ်ပင်ဟာ တန်ဖိုးရှိသလို ယမင်းအတွက်တော့ မောင်နှမတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိတ်ဆွေတွေရဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းဟာလည်း ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်အောင် အရမ်းတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ၀မ်းလည်းသာမိသလို ၀မ်းလည်းနည်းမိပါတယ်။ ၀မ်းသာတာကတော့ ယမင်းကို အမြဲအားပေးနေတဲ့မောင်နှမတွေအတွက်ပေါ့။ ၀မ်းနည်းတာကတော့ ယမင်းလေးလေ ခုထိ ဘယ်သူ့ကိုမှ ထိထိရော၇်ရောက် အားမပေးခဲ့ဖူးလို့ပါဘဲ။ အားလုံးကိုလည်း ယမင်း တတ်နိုင်သလောက် ဆက်လက်ကူညီသွားမှာပါ။ ပြောမှားဆိုမှားရှိရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါနော်။
မောင်လေးကိုလည်း မမကြီး ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ မမကြီးရဲ့ နာမည်ဟာ အဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့ ပြည့်စုံနေလိမ့်မယ်လို့ မထင်ခဲ့မိပါဘူး။
ကဗျာကို နောက်နေ့မှ တင်ပြပေးပါမယ်နော်။
မြန်မာ ဘလောက်ဂါ တွေ ဖြစ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ဘ၀အတွေ့အကြုံတွေ ကို အခြေခံပြီး ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ အေးအေးလေး သီချင်းတွေ အများစုပါဝင်ပါတယ်…။ တေးရေးတွေ ကတော့ ကိုမျက်လုံး၊ မင်းယွန်းသစ်၊ ဂေါက်ဂေါက်၊ မောင်ခ အော် ရေးရင်းနဲ့ old blog band က လူအကုန် ကုန်ပြီ။ အော် ဘလောက်ဂါတွေ တွေကြုံခဲ့ရတဲ့ အဓိက အဖြစ်အပျက် တွေကို သီချင်း အအေး တွေနဲ့ ဖွင့်ချထားပါတယ်..။ ဘလောက်ဂါတွေလဲ ဒီပို့စ်ကို ၀ိုင်း ကြော်ငြာပေးကြ အုံးနော်..။ စပွန်ဆာက mbs ပါ။ နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါ။ တခုခု တော့ ကိုယ်ဘ၀ တစ်ပိုင်းတစ်စ နဲ့ သွားပြီးတိုက်ဆိုင်ချင် တိုက်ဆိုက်နေပါလိမ့်မယ်.။
(ဤပို့စ်ကို ညီမလေးသဲသဲဘလော့ဂ်မှ ပြန်လည် ကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
How လား၊ Why လား
How ကို သိတဲ့လူဟာ အလုပ်သမားကောင်းဖြစ်မယ်။ Why ကို သိတဲ့လူဟာ အလုပ်ရှင်ကောင်းဖြစ်မယ်။ လူ့အသက်ဟာ ၂၅ နှစ်မတိုင်ခင်ပဲ ကြာနေတာ ကျော်လွန်သွားတာနဲ့ ကုန်တာ အရမ်းမြန်မတယ်။ ခံယူချက်နဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို ၂၅ နှစ်မတိုင်ခင် တိတိကျကျ ဆုံးဖြတ်မှ အောင်မြင်မှု ခိုင်မာမယ်။
သေသေချာချာ ကြီးပွားချင်ရင် သေသေချာချာ လုပ်ပါ။ လူတစ်ယောက်မှာ အရည်အချင်းရှိ မရှိဆိုတာ သူ ရရှိထားတဲ့နေရာကို ဘယ်လောက်ကြာကြာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
အခက်အခဲ၊ ဒုက္ခတစ်ခုခုနဲ့ ရင်ဆိုင်ရရင်
ငါ့ရဲ့စိတ်ကို ကြီးမြင့်အောင်။ ငါ့ကို ခံနိုင်ရည် ဘယ်လောက်ရှိလဲ စမ်းနေပြီ။
ဆိုပြီး အံကြိတ်ပြီးတော့သာ ခံပေတော့။ အဲဒါအခါမှာ စိတ်ဓာတ်စွမ်းအား ပြည့်လာလိမ့်မယ်။ မယုံရင် စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ပါနော်။
၂၀၀၆ ခုနှစ် အကောင်းဆုံးဆု
၂၀၀၆ ခုနှစ် အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆုရှင်ကတော့ တက်သစ်စ ဇာတ်နဲ့အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် သရုပ်ဆောင်သွားတဲ့ ဖိုးကျော်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မျှော်လင့်ခြင်းများစွာဇာတ်ကားတွင် ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆုရှင်ကတော့ မေသဉ္စာဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အောကာင်းဆုံးဇာတ်ကားဆုရှင်ကတော့ န၀ရတ်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးဖြစ်ပြီး ဇာတ်ညွှန်းဆုကီးဇော်မြင့်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာဆုရှင်ကတော့ မောင်မျိုးမင်း(ရင်တွင်းဖြစ်) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံး တေးဂီတဆုရှင်ကတော့ ကိုသော်ဇင် လ၀န်းအိမ်ဖြစ်ပါတယ်။
တည်းဖြတ်ဆုရှင်ကတော့ ဇော်မင်း (ဟန်သာမြေ) ဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံဆုရှင်ကတော့ ဦးသန်းညွန့် (ပန်းသာ) ဖြစ်ကြပါတယ်။
၂၀၀၆ ခုနှစ် အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု
၂၀၀၆ ခုနှစ် အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု ရရှိခဲ့သူကတော့ အကယ်ဒမီငါးဆုရှင် ရန်အောင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးရန်အောင်ဟာ ဂုဏ်ရှိန်ပြင်းတဲ့ချစ်ခြင်းသိက္ခာတွင် သူ့ရဲ့ကျရာနေရာကနေ ပီပြင်စွာ သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်ဒမီဆုများစွာကို လက်ဝယ်ပိုင်ပိုင်ရရှိခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆုရသူကတော့ နာန္ဒာလှိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တောင်သမန်သစ္စာ ဇာတ်ကားတွင် သရုပ်ဆောင်သွားသူ ဖြစ်ပါတယ်။
အမတို့ မောင်နှမတွေ ဒီရပ်ဝန်းလေးမှာ ဆုံခဲ့ကြတာ ခုဆိုရင် တစ်နှစ်တင်းတင်း ပြည့်ခဲ့ပြီပေါ့။ ဘာမဆို ရှေ့က တက်ညီလက်ညီနဲ့လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မောင်လေး ရေ ခုတော့ မင်း ဘယ်ဆီမှာလဲ။ ကိုယ်ကျိုးမကြည့်ဘဲ အမြဲတက်ကြွစွာ ပါဝင်လှုပ်ရှာခဲ့တဲ့ မောင်လေး နေဘုန်းလတ်ဆီကို ကံကောင်းခြင်းတွေ ရောက်ပါစေလို့ အမြဲဆုတောင်းနေမိတယ်။ တို့ဘလောဂ့်မောင်တွေဟာ မွေးချင်းမောင်နှမတွေထက် ရင်းနှီးမှု ပိုခဲ့ကြတယ်နော်။ အမရေ ရှေ့ဆက်ပြီး လုပ်ဆောင်မှုတွေအများကြီးရှိသေးတယ်နော်။ ကျွန်တော် မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်ရင် တွေ့ကြမယ်လို့ မင်းတစ်ဖွဖွ ပြောခဲ့ဖူးတယ်။ ခုတော့ မင်းဘယ်ဆီမှာလဲ။ မင်းသတင်းတွေကို အမ အလုပ်မအားတဲ့ကြားက အမြဲနားစွင့်နေမိတယ်။ ကံကောင်းခြင်းများစွာနဲ့အတူ မင်း အစ်မတို့မောင်နှမတွေ စုစည်းရာ ရပ်ဝန်းလေးဆီကို အမြန်ပြန်လာနိုင်ပါစေလို့ အစ်မဆုတောင်းမိတယ်။
Why My Land is ever Golden?
The golden dome, this is Myanmar. It will be quite unlike any land you know about it. So it is called goldmyanmar.
Please, Excuse me my I introduce you myseft. I am Yamin. I amamyanmar. We all are always ready to help other whoever he is. Myanmar hasabig heart. I advise you that you should go to bagan, an ancient city which always welcome to visitors.
And then, You must visit to the Shwedagon pagoda,amagniciticerd and marvellous milestone of ours. If stands likeasolid gold monument. Long long ago each kings of myanmar kingdom and Men Kingdom oftered and decrated it. Some kings oftered gold equal so their body-weight to the pagoda. So it is the greatest pagoda in Myanmar. It is the most highest one. It is the holy space of all Buddhist and represents the Buddha. You must know that Myanmar is the land of pagodas. To visit the pogodas, you can study of ancient and morden myanmar culture.
Then, Your shold visit to Mandalay, the capilut of upper Myanmar and an ancient city/ It is also the centre of Myanmar art and culture. Many artierafts display Myanmar's ancient art and culture.
My parents are citizens of Myanmar. So I amamyanmar citizen. There are many reasons why myanmar is called the golden Land. Many pagodas gilded wilh pure gold lead to have the tittle of the GoldMyanmar. Most Myanmars are religious who pay resped of sangas(monks) who wear yellow robes.
Please, give me your advice. Although T amaMyanmar and I like Myanmar culture, I should like to learn English well because English is the most import language for me now, Don't forget to give me meritorious deeds.
I want to tell you that me must keep three most precious gems(Buddha, Dhama and Sanga).
Take worship the Buddha who fought us all to live in the peaceful life. If will produceagreat benefit.
So, me must think by speaking and acting with good intentons.
Apple iPhone အတွက် Messx အကြောင်း
Messx သည် သင်ရဲ့တစ်နေ့တာ သတင်းကို စာပို့စနစ်အသုံးချမှုကို တိုးတက်ပြောင်းလဲစေမယ့် ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်မိုဘိုင်းဖုန်းတွေလို မဟုတ်ဘဲ ရိုးရှင်းစွာပြုလုပ်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
သင်ရဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းဟာ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်နိုင်တယ် ဒါမှမဟုတ် သင်ကိုယ်တိုင် ဆော့ဖ်ဝဲကို ဖုန်းထဲသို့ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သည်ဆိုပါက Messx ကို အင်တာနက်မှ ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။www. messx.net/ store တွင် လေ့လာကြည့်ပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ နိုင်ငံတွေမှာ လက်လီဆိုင်တွေမှာလည်း ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ www.messx.net/store/ local တွင် အနီးဆုံး ဆိုင်ကို ရှာဖွေနိုင်ပါကြောင်း သိသမျှ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။